Lutein Cas 127-40-2 Alaab-qeybiyeyaal, Soo-saareyaal ka socda Bolise
[Isha Botanical] Ubax Marigold
[Lambarka CAS] 127-40-2
[Foomka Molecular] C40H56O2
[Miisaanka Molecular] 568.88
[Muuqaalka] Budada Jaallaha ah ee Orange
1. Codsaday beerta cuntada, waxaa loo isticmaalaa sida nooc ka mid ah midabka dabiiciga ah, kaas oo ku dari kara midabka alaabta;
2. Lagu codsado goobta wax soo saarka caafimaadka, luteinku wuxuu buuxin karaa nafaqeeyayaalka indhaha, wuxuu ilaaliyaa retina;
3. Codsada goobaha la isku qurxiyo, waxaa had iyo jeer loo isticmaalaa si loo yareeyo midabka da'da ee dadka.
Ku saabsan Lutein
Lutein waa jaale ilaa orange carotenoid oo laga helo khudaarta caleenta cagaaran ee madow sida marigold, isbinaajka iyo kaluunka, galleyda jaalaha ah, jaallo ukunta, karootada, iyo dabacasaha. oo laga soosaaray ubaxa marigold ayaa aad ugu kulul suuqa. Lutein waxa uu ku urursan yahay xuubka indhahaaga, sidaa awgeed waxa loo malaynayaa in uu faa'iido u leeyahay aragga. Lutein sidoo kale waa mid ka mid ah antioxidants kuwaas oo u muuqda inay faa'iido u leeyihiin kabitaan ahaan. lutein-ku waxa ay kaa caawin kartaa in ay hoos u dhigto horumarka macular degeneration.
Lutein Powder waxaa si weyn loogu isticmaalaa waxyaabaha lagu daro cuntada, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa midab dawo ah.